ArcGIS သင်တန်းများ - egeomates
ArcGIS Pro - လွယ်ကူစွာသင်ယူပါ။ArcGIS Pro ကို ArcMap ၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပါသည်€ 199.99€ 139.99 3.5
ArcGIS Pro သည်အဆင့်မြင့်ခဲ့သည်ArcMap အစားထိုးဒါက GIS ဆော့ဖျဝဲ - ArcGIS Pro ကို၏အဆင့်မြင့် features တွေသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ€ 99.99€ 69.99 3.1
ArcGIS 10 သည်အဆင့်မှ စတင်၍ ခြေလှမ်းများလှမ်းသည်GIS ၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ၊ ArcGIS Desktop 10 ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သမျှကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါ€ 199.99€ 139.99 3.7
Python ကို & arcpy, ESRI ArcGIS ၏ Python ကိုစာကြည့်တိုက်များ၏အခြေခံPython ကိုနှင့် Geoprocessing များအတွက် arcpy ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၏ syntax ကိုနားလည်€ 49.99€ 34.99 4.3
အခြေခံပညာကနေ Pro ကို Go ရန်: Spatial ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ArcGIS Desktop ကိုများအတွက်ArcGIS Desktop ကိုအတူ Spatial ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: GIS မာစတာနည်းပညာနှင့်ပွင့်လင်းတံခါးပေါက် Amazing Careers Geospatial မှ€ 199.99€ 139.99 4.3
အရောင်းရဆုံး ArcGIS Pro ကို အသုံးပြု. Python ကို Developers များအတွက် ArcPyGIS ပူဖြစ်ပါသည် - သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ရန်သင့် Python နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု ယူ. အလွန်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း options များတိုးပေးရန်။€ 79.99€ 54.99 4.3
ArcGIS vs ArcGIS Pro Level 1: အခြေခံကျသည်အကယ်၍ သင် ArcGIS နှင့် ArcGIS Pro နှစ်ခုလုံးကိုသင်လေ့လာလိုလျှင်သင်၏အထူး GIS အလုပ်အတွက်သင့်တော်သောဆော့ဝဲလ်ကိုရွေးချယ်လိုပါကစာရင်းပေးသွင်းပါ။€ 199.99€ 139.99 4.6
သင်ယူခြင်းလမ်းကြောင်း - ArcGIS: ArcGIS ဖြင့်စတင်ပါArcGIS ၏စွမ်းအားကိုအသုံးချပါ။€ 199.99€ 139.99 3.9
အရောင်းရဆုံး GIS & ArcGIS အဆင့် ၁: ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcSceneArcMIS, ArcGlobe, ArcCatalog, ArcScene နှင့် Web GIS Basic တို့ဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင် Zero ကို ArcGIS တွင်လုပ်ပါ€ 199.99€ 139.99 4.2
သင်ယူခြင်းလမ်းကြောင်း - ArcGIS: ArcGIS 4.x နှင့်အတူ Cross-Platform Apps များArcGIS ဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် mobile GIS applications များတည်ဆောက်ရန် geomatics ၏အခြေခံကိုပိတ်ထားပါ€ 199.99€ 139.99 4.3
မြေအောက်ရေအလားအလာရှိသောဇုန်များ GIS - ပြီးပြည့်စုံသောစီမံကိန်း ArcGISရေလွှမ်းမိုးဘေးအန္တရာယ်မြေပုံ၊ မိုးခေါင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်အချက်အလက်များမှအတက်အကျ၊ ရေဝေငှခြင်း၊€ 44.99€ 30.99 4.5
အရောင်းရဆုံး ArcGIS နှင့်အတူ ArcSWAT ပုံစံ - မည်သည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်Areaရိယာအတွက်မဆို - GISArcSWAT ကိုအသုံးပြု။ ရေဝေငှခြင်း Get Discharge, Rainfall - Ungauged ဖမ်းဆီးရမိ၏မျောပါခြင်းပုံစံ။ ဤသည်ကြိုတင် GIS ဖြစ်ပါတယ်€ 44.99€ 30.99 4.8
မြေအသုံးပြုမှုမြေအဖုံးခွဲခြားခြင်း GIS, ERDAS, ArcGIS, ENVIမြေယာအသုံးပြုမှုခြစ်ရာတိုးတက်ခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအားလုံးအဝေးမှ sensing နှင့် GIS ။ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်သင်ယူခြင်း၊ GIS လုပ်ငန်းများ။€ 44.99€ 30.99 4.6
ArcGIS vs ArcGIS Pro Level 2: မြေပုံပုံစံ၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် Web GISအကယ်၍ သင်သည် ArcGIS နှင့် ArcGIS Pro နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်မြေပုံပုံစံ၊ Digitizing & Web GIS ကိုလေ့လာလိုပါကထို့နောက်စာရင်းသွင်းပါ။€ 199.99€ 139.99 4.3
GIS နှင့် Web GIS ၏အခြေခံ - QGIS, ArcGIS Pro & Online, GeoServerGIS နှင့် Web GIS အလုပ်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်နှင့်အခြေခံဗဟုသုတများကိုဤနှစ်ခုလုံးတွင်စတင်လိုပါက ENROLL ... !!€ 199.99€ 139.99 3.7
ArcGIS: နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်းကို ArcGIS တွင်လေ့လာပါGIS (ArcGIS PRO) တွင် Deep Learning algorithms (ဥပမာ Neural Networks) ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူခြင်း၊ စက်သင်ယူခြင်းကို Remote Sensing လေ့လာခြင်း။€ 19.99€ 13.99 4
ArcGIS သင်တန်းပြီးဆုံးသည်GIS ကိုပညာအရည်အချင်းနှင့်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားအစမှသည်အဆင့်တစ်ခုအထိလေ့လာခြင်း€ 99.99€ 69.99 4
Smart GIS အတွက် ArcGIS ProSmart GIS လုပ်ငန်းအတွက် ArcGIS Pro တွင် HERO သို့သင်ကိုယ်တိုင် ZERO လုပ်ပါ။ ArcGIS Pro ကို ၂၃ ရက်ကြာအခမဲ့ရယူရန်ကိုလည်းသင်လေ့လာပါလိမ့်မည်။€ 199.99€ 139.99 4.2
စတင်သူများအတွက် ArcGisစတင်သူများအတွက် ArcGis€ 104.99€ 74.99 4.6
hydrology အတွက် ArcGIS ၏အခြေခံကိုလေ့လာပါစျေးကွက်ရှိအဓိက GIS ဆော့ဝဲလ်၏အခြေခံများနှင့်၎င်းကိုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ€ 19.99€ 13.99 4.7
ArcGIS Pro ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း - Beginners သင်တန်းArcGIS Pro တွင်ဤအစပြုသူများကိုသင်တန်းပေးခြင်းဖြင့်တက်ကြွ။ ထူးခြားသောမြေပုံများပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာပါ€ 49.99€ 34.99 4.6
အရောင်းရဆုံး ArcGIS အတွက်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ - ၁ တွင် ၄သင်၏ geodatabase ရှိဒေတာများကို အသုံးပြု၍ ဝက်ဘ်မြေပုံများပြုလုပ်ရန် ArcGIS ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဘုံကိစ္စများလေ့လာပါ€ 199.99€ 139.99 4.2
ArcGIS Pro အတွက် Python နှင့် ArcPy နှင့်အတူခက်ခဲသောအချိန်များသက်ဆိုင်သူများထံမှမြေပုံလိုအပ်ချက်များကိုအလိုအလျောက် PDF မြေပုံများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း€ 34.99€ 23.99 4.4